Sacuudi Carabiya oo shuruud ku xiray soo afjarida go'doominta Qadar
Mareykanka ayaa wadda dedaalo daaha gedaashiisa ka socda kuwaasoo xal lagu goobayo.
WASHINGTON, US – Wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga, Amiir Faysal bin Farxaan, ayaa xusay in la xalin karo xiisada saddex sano jirtsatay ee kala dhaxeysa Qadar kadib la kulanka dhigiisa dalka Mareykanka, Mike Pompeo.
Sanadkii 2017-kii, Riyadh oo ay wehliyaan xulafeeda Imaaraadka, Baxreyn iyo Masar ayaa xiriirka diblumaasiyadeed u jaray Dooxa kuna soo rogay xayiraad dhanka isugu jirta dhinacyadda dhulka, cirka iyo Badda.
"Way naga go'an tahay in aan helno xal," ayuu Khamiistii ka yiri dood uu soo agaasimay Machadka Washington ee Siyaasadda Bariga dhow.
Amiir Faysal oo rajeeyay in Qadar ay la qaadan doonto mowqifkaas xal-doonimada ah ayaa shuruuda kaliya ee isu soo dhowaanshiyaha hortaagan wuxuu caddeeyay in ay tahay wax ka qabashada "walaaca ammaanka".
"Hadii aan isla helno qaab aan horey ugu sii socon karno walaaca amniga, waxaan war wanaagsan u noqon doonaa gobolka," ayuu tibaaxay.
Afarta dal ee go'doomiyay Qadar ayaa ku eedeeyay in ay taageerto "argagixiso", in ay faraglineyso siyaasadooda arrimaha gudaha iyo in ay xiriir dhow la leedahay Iiraan. Dooxa waxay qashinka ku dartay eedeymahaas.
Xilli isku dayo badan fashilmeen markii Dooxa diidey dalabyada; xiritaanka Al-Jazeera Tv, joojinta taageerada Kooxaha Islaamiyiinta, yareynta xiriirka Iiraan iyo eryida ciidanka Turkiga, Washington ayaa wali olole hoose wadda.
Amiirka Qadar, Sheekh Tamim bin Hamad Al Thani oo wariyey in ay diyaar u yihiin wadahadal lagu dhameeyo qalalaasaha diblumaasiyadeed ayaa ku adkeystay in xal walba uu noqdo mid ixtiraamaya madaxbabaanida wadankiisa.
Bishii June, Kuwait, oo u kala dab-qaadeysay Qadar iyo afarta dal Carbeed, ayaa tilmaamtay in dedaalo ay socdaan, balse horumar aan laga sameyn.
Wasiirka arrimaha dibada Qadar, Sheekh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani oo bishii December tabiyey in shirar dhacay ay soo afjareen xiisada, ayaa bil kadib wuxuu shaaca ka dhigay in dedaaladaas aysan wali miradhalin.
Soomaaliya: Gurmad horleh oo soo gaarey Muqdisho
Soomaliya 17.10.2017. 15:59
Tan iyo shalay waxaa Muqdisho soo gaarayey gurmad caafimaad, oo loogu talo galay in lagu caawiyo dadkii ku dhaawacmay masiibadii ka dhacday 14-kii October Isgoyska Zoobe.
Boqorka Sacuudiga oo casuumaad u diray Amiirka Qadar
Caalamka 05.12.2019. 10:43
Ciidanka Mareykanka oo la ogolaadey in laga joojiyo weerarada madaafiicda
Caalamka 11.10.2020. 19:00
Sudan oo diidey dalab ku aadan xiriirka Israel kana yimid Mareykanka
Afrika 27.09.2020. 06:40
Jubaland oo ka falcelisay qoraalkii muranka dhaliyey ee Mareykanka
Soomaliya 21.08.2020. 18:35
Madaxweynaha HirShabelle iyo safiirka Qadar oo ku kulmay Muqdisho
Soomaliya 02.08.2020. 15:25
Xukunka Rag loo haysto weerar ka dhacay Xabsiga Dhexe 25.10.2020. 13:48